एक विद्यार्थी एक तरकारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण १८, २०७५ प्रतीक्षा काफ्ले
स्याङ्जा — कालीगण्डकी गाउँपालिका ६, दब्छेस्थित धु्रवज्योति माविको कक्षा ८ मा अध्ययनरत प्रकृति भट्टराई स्कुलमा तरकारी खेती गर्छिन् । उनी मात्रै होइन, कक्षाका सबैजना पालैपालो तरकारी बारीमा खटिन्छन् । उनीहरूले स्कुलको बारीमा थरीथरी तरकारी फलाएका छन् ।
विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान दिन विद्यालयले आफ्नै परिसरमा तरकारी बारी बनाएको छ । त्यहाँ विद्यार्थीले थरीथरी तरकारी फलाएका छन् । ‘कक्षामा पढेका विषय व्यवहारमा उतार्न स्कुलकै बारीमा जान्छौं, कक्षाको बीचमा तरकारी बारीमा काम गर्दा रमाइलो लाग्छ, सिकिन्छ पनि’ प्रकृति भन्छिन् ।
उनीसँगै पढ्ने अस्मिता राना पनि कक्षा खाली भएका बेला बारीमै बिताउँछिन् । पाँच वर्षदेखि विद्यार्थीलाई बारीमै लगेर प्रयोगात्मक शिक्षा दिएको प्रध्यानाध्यापक हीराबहादुर गाहाले बताए । विद्यालयले ‘एक विद्यार्थी एक तरकारी’ उत्पादनको नारा बनाएर प्रयोगात्मक कक्षा सुरु गरेको हो । मावि तहसम्मका कुल ३ सय ११ विद्यार्थीले बारीमा कम्तीमा एकवटा तरकारीको बिरुवा रोपेर स्याहार गर्नुपर्छ । कहिलकाहीँ उनीहरू तरकारी स्याहार्न विद्यालय समयभन्दा छिटो स्कुल आउँछन् । ‘सामूहिक रूपमा लगाएको तरकारी खेतीले उनीहरूलाई हौसला मिलेको छ,’ प्रधानाध्यापक गाहाले भने, ‘पढेकाले कलम मात्र होइन, कुटो, कोदालो पनि चलाउन जरुरी छ । सबैले कृषि पेसालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।’
अभिभावक पूर्णबहादुर विकले स्कुलले तरकारी खेती गर्न सिकाएकामा खुसी व्यक्त गरे । ‘स्कुलमा सिकेर छोरीले घरमा तरकारी लगाएकी छन्,’ उनले भने । ०३४ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा जनजाति र दलित समुदायका विद्यार्थी धेरै छन् । कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ११ सम्म कुल विद्यार्थीमध्ये ब्राह्मण ९ जना मात्र रहेको विद्यालयले जनाएको छ ।
विद्यालयमा ८६ जना दलित र बाँकी सबै जनजाति रहेको प्रध्यानाध्यापक गाहाले जानकारी दिए । शिक्षा मन्त्रालयले क्षेत्रीयस्तरमा उत्कृष्ट छानिएको यस विद्यालयमा व्यावहारिक र सैद्धान्तिकसंँगै गुणस्तरीय शिक्षा दिएको प्रधानाध्यापक गाहाले दाबी गरे । यो विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने भएकाले विद्यार्थीको संख्या बढदै गएको उनी बताउँछन् ।
जिल्ला शिक्षा विकास तथा इकाई कार्यालयले विद्यालयमा सूचना र सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) माध्यमबाट पढाइ हुने भएकाले गुणस्तर राम्रो भएको बताएको छ । ‘एक विद्यार्थी एक फूल’ यो विद्यालयको अर्को विशेषता हो । त्यसैले यो विद्यालयमा फूलबारी पनि चिटिक्क छ । यो विद्यालयको भूतपूर्व विद्यार्थी मञ्चले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट रकम संकलन गरी एम्बुलेन्स खरिद गरेको छ । त्यो एम्बुलेन्सको आम्दानीबाट अंग्रेजी शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०६:५३
पारसले ल्याए ‘धरोहर’
काठमाडौँ — अहिले संगीतलाई चर्को अर्थोपार्जनका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि बेथिति आइरहेको आरोप उत्तिकै सुनिन्छ । यस्तोमा कालजयी गीतमा भन्दा क्षणिक चर्चाका लागि स्रष्टाहरु बिकिरहेको टिप्पणी बाक्लिन थालेको छ ।
राष्ट्रभाव र भाइचाराका गीत कम निस्किरहेका बेला गायक छविसहित पत्रकार पारस नेपालले ‘धरोहर’ एल्बम सार्वजनिक गरेका छन् । भृकुटी मण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा बिहीबार वरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधान र वरिष्ठ साहित्यकार प्रा. अभि सुवेदीले लोकार्पण गरेको उक्त एल्बममा माटो र मुटुका भनिएका पाँच गीत छन् ।
लोकार्पण समारोहमा एल्बममा समावेश ‘कस्तो हुन्थ्यो...’ गीतको भिडियो पनि देखाइएको थियो । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको रचना तथा डब्बु क्षत्रीको निर्देशन रहेको गीतमा भ्रातृत्वको भावना व्यक्त गरिएको छ । भिडियोमा वरिष्ठ रंगकर्मी वीरेन्द्र हमाल, राहुल श्रेष्ठ र सबिना कार्कीले अभिनय गरेका छन् ।
एल्बममा ‘गर्मी भयो रे...’, ‘दायाँ बायाँ...’, ‘सबै भन्छन्...’ र ‘तिमीले टेक्ने...’ बोलका गीत समाविष्ट छन् । यी गीत क्रमश: क्षेत्रप्रताप अधिकारी, अमन मास्के, दिनेश अधिकारी र फूलमान वलले लेखेका हुन् । सबै गीतमा जुगल डंगोलको संगीत सुन्न सकिन्छ ।
कार्यक्रममा गायक प्रधानले पारसका गीतले आफूलाई पुराना दिनको शैली स्मरण गराएको बताए । ‘हाम्रो पालाको जस्तै आधुनिक गीतहरू रहेछन्,’, उनले भने, ‘गायक नेपालको स्वर मीठो छ । सस्टेन नोट र मिडमा राम्रो सुनिने रहेछ । गायनलाई नछोड्नुस् । बरु अझै खुलेर, नधकाई गाउनुहोला ।’
प्रा. सुवेदीले ‘धरोहर’ का गीत सुनेर आफूलाई प्रेरणा जागेको भन्दै गायकलाई त्यसका लागि धन्यवाद दिए । उनले भने, ‘भावनाभित्रको अभिव्यञ्जना समाउँदै भित्रै पसेर गाउन सक्ने सामथ्र्य पारसको स्वरमा पाएँ । यो शैलीलाई अझ व्यापक बनाउनुस् । स्वरमा डाइमेन्सन छ ।’ उनले गायकले कवितालाई नै गाइदिएको उल्लेख गर्दै गीतहरू सुनिरहन मन लाग्ने गरी बनेको तर्क गरे ।
कान्तिपुरकर्मी पारसले आफूलाई विश्वास गरेर गीत दिने र एल्बम निर्माणमा सहयोग गर्नेप्रति आभार व्यक्त गरे । संगीतकार डंगोलले पाँच वर्षदेखिको आफूहरूको प्रयास बल्ल सफल भएको बताए । ‘मेरा लागि यो विशेष एल्बम हो,’ उनले भने, ‘अग्रज स्रष्टाका गीतमा संगीत भर्ने अवसर मिल्यो ।’ जुगलकै संगीतमा पारसको स्वर–शब्दमा यसअघि ‘नालापानी कालापानी...’ बोलको जागरण गीत बजारमा आइसकेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण १७, २०७५ २१:४२